Bit By Bit - Fametraham-panontaniana - 3.5.2 Wiki fanadihadiana
Wiki fanadihadiana vaovao hahafahan'ny grefy ny mihidy sy misokatra fanontaniana.
Ankoatra ny fametrahana fanontaniana amin'ny fotoana ara-boajanahary sy amin'ny toe-javatra voajanahary kokoa, ny teknolojia vaovao koa dia mamela antsika hanova ny endrik'ireo fanontaniana. Ny ankamaroan'ny fanontaniana momba ny fanadihadiana dia mihidy, miaraka amin'ny olona misafidy amin'ny safidy voafaritra izay nosoratan'ny mpikaroka. Ity dia dingana iray izay ahitana mpikaroka iray amin'ny fanadihadiana malaza antsoina hoe "mametraka teny eo amin'ny vavan'ny olona". Ohatra, misy fanontaniana fanadihadiana mihidy:
"Ity fanontaniana manaraka ity dia momba ny asa. Azafady mba jereo ity karatra ity ary lazao ahy izay zavatra ao anatin'ity lisitra ity izay tianao indrindra amin'ny asa?
Tsy misy loza mety hotsaraina
Fohy ny ora fiasana, fotoana malalaka
Fahombiazana ho amin'ny fandrosoana
Tena ilaina ny asa ary manome fahatsapana fahombiazana. "
Saingy ireo ihany no valiny azo atao? Mety ho tsy misy dikany ny mpikaroka raha mametra ny valiny amin'ireo dimy ireo? Ny loharanom-panontaniana manakatona dia fanadihadiana misokatra. Ity ilay fanontaniana iray nanontaniana tamin'ny endrika misokatra:
"Io no fanontaniana manaraka momba ny asa. Ny olona mitady zavatra hafa ao amin'ny asa. Inona no tena kokoa amin'ny asa? "
Na dia mitovy aza ireo fanontaniana roa ireo, ny fanandramana fanadihadiana nataon'i Howard Schuman sy Stanley Presser (1979) manambara fa afaka mamokatra valiny hafa izy ireo: ny 60% -nin'ny valin-kafatra amin'ny fanontaniana misokatra dia tsy tafiditra ao anatin'ireo valim-panontaniana dimy noforonina ( tarehimarika 3.9).
Sary 3.9: Ny vokatra azo avy amin'ny fanandramana fanadihadiana mampiseho fa mety hiankina amin'ny fanontanianao ny fanontaniana na tsia ny fanontaniany. Nifanaraka tamin'ny Schuman and Presser (1979) , latabatra 1.
Na dia afaka manome loharanom-baovao maro samihafa aza ny fanontaniana misokatra sy mihidy ary samy nalaza tamin'ny andro voalohandohan'ny fikarohana ny famerenana fanontaniana, dia nanjary nanapaka ny kianja ireo fanontaniana. Ity fanapahan-kevitra ity dia tsy hoe satria voaporofo fa voavaha ny famaranana tsara kokoa, fa noho izy ireo mora kokoa amin'ny fampiasana; Ny fizotry ny famakafakana ny fanontanianao dia misy diso sy mora. Ny fialana amin'ny fanontaniana misokatra dia mampalahelo satria ny fampahalalana izay tsy fantatry ny mpikaroka dia efa mialoha ny fotoana izay mety ho sarobidy indrindra.
Ny fifindrana avy amin'ny olombelona - nomena ny fanadihadiana nataon'ny mpanara-maso informatika, dia manolotra fomba vaovao avy amin'ity olana tranainy ity. Ahoana raha afaka mametraka fanontaniana momba ny fanadihadiana isika izay mampifandray ireo singa tsara indrindra amin'ny fanontaniana misokatra sy mihidy? Izany hoe, raha toa isika afaka manana fanadihadiana iray misokatra ho an'ny vaovao vaovao ary mamokatra valinteny mora foana amin'ny fanadihadiana? Izany indrindra no niezahan'i Karen Levy sy i (2015) hamorona.
Nihevitra manokana izahay sy i Karen fa ny vohikala izay manangona sy manara-maso ny votoaty entin'ny mpampiasa dia afaka manazava ny famolavolana karazana fanadihadiana vaovao. Tena nanintona manokana an'i Wikipedia izahay-ohatra tena tsara momba ny rafitra misokatra sy mavitrika notarihin'ny votoaty ampiasain'ny mpampiasa - ka niantso ny fanadihadihana vaovao izahay ho fanadihadiana wiki . Tahaka ny hoe mivoatra ny Wikipedia amin'ny fotoan-dehibe mifototra amin'ny hevitry ny mpandray anjara dia mieritreritra ny fanadihadiana iray izay mivoatra amin'ny fotoana mifototra amin'ny hevitry ny mpandray anjara. Karen sy I dia nanamboatra tranobe telo izay tokony hahafa-po ireo fanadihadiana wiki: tokony ho tia faniriana, fiaraha-miasa ary fampifanarahana izy ireo. Avy eo, miaraka amin'ny ekipa ny tranonkala mpandraharaha, dia namorona ny tranonkala izay mety mihazakazaka Wiki surveys_: www.allourideas.org .
Ny fizotry ny fanangonana tahiry ao amin'ny fanadihadiana iray wiki dia asehon'ny tetikasa iray nataonay tamin'ny biraon'ny ben'ny tanànan'i New York mba hampidirana ny hevitry ny mponina ao amin'ny PlaNYC 2030, drafitra maharitra maharitra eto New York. Mba hanombohana ny dingana, ny Biraon'ny Ben'ny tanàna dia namoaka lisitra 25 hevitra mifototra amin'ny fanadihadiana teo aloha (ohatra: "Mitaky ny fananganana trano lehibe rehetra mba hampivoarana ny fampiasana angovo azo antoka" ary "Ampianaro ny ankizy momba ny olana maitso ao anatin'ny fandaharam-pianarana"). Amin'ny fampiasana ireo hevitra 25 ireo amin'ny maha-masomboly, ny Biraon'ny Ben'ny tanàna dia nanontany ny fanontaniana hoe "Inona no heverinao fa hevitra tsara kokoa amin'ny fananganana New York City maitso?" Ireo hevitra ireo dia nampiseho hevitra maromaro (ohatra: "Open schooljards manerana ny tanàna toy ny kianjan'ny daholobe "ary ny" Fampitomboana ny famolavolana hazo voatokana amin'ny manodidina miaraka amin'ny tahan'ny taha ambony "), ary nangatahana izy ireo hisafidy eo anelanelan'izy ireo (sary 3.10). Taorian'ny fisafidianana, ireo solotenana dia avy hatrany dia naseho niaraka tamin'ny hevitra roa hafa nofantenana. Afaka nanohy ny fampahafantarana mikasika ny safidy tiany izy ireo raha mbola maniry izy ireo amin'ny fifidianana na amin'ny fisafidianana "Tsy afaka manapa-kevitra aho." Tsara indrindra, na ahoana na ahoana, ireo mpanampy dia afaka nanolotra ny heviny manokana, izay tsy maintsy ankatoavin'ny ny Biraon'ny Ben'ny tanàna-dia lasa ampahany amin'ny dobo hevitra izay hampisehoana amin'ny hafa. Araka izany, ireo fanontaniana noraisin'ireo mpandray anjara dia samy nivoha ary nikatona niaraka tamin 'izany.
Figure 3.10: Fanaraha-maso ho an'ny fanadihadiana wiki. Ny Panel (a) dia mampiseho ny valin'ny fandraisana andraikitra ary ny tontonana (b) dia mampiseho ny efijery vokatra. Salganik and Levy (2015) fahazoan-dàlana avy amin'i Salganik and Levy (2015) , sary 2.
Ny biraon'ny ben'ny tanàna dia namoaka ny fanadihadiany wiki tamin'ny Oktobra 2010 miaraka amin'ny andiam-pivondronana maromaro mba hahazoana valiny avy amin'ny mponina. Nandritra ny efa-bolana teo ho eo, mpanohana 1.436 no nanampy valin-teny 31.893 sy hevitra 464 vaovao. Raha ny marina, 8 tamin'ireo hevitra tena mahatsikaika 10 no nakarin'ireo mpandray anjara fa tsy nandray anjara tamin'ny andian-tsakafo avy amin'ny Biraon'ny Ben'ny tanàna. Ary, araka ny hamaritanay ao amin'ny taratasinay, ity lamina ity ihany, miaraka amin'ny hevitra nampidirina tsara kokoa noho ny hevitra voajanahary, dia mitranga amin'ny fanadihadiana wiki maro. Amin'ny teny hafa, amin'ny fisokafana amin'ny vaovao vaovao, ireo mpikaroka dia afaka mianatra zavatra izay tsy ho tapaka amin'ny fampiasana fomba fohy kokoa.
Ankoatra ny valin'ny fanadihadiana manokana, ny tetikasa fanadihadihana wiki dia mampiseho ihany koa ny fomba fiasan'ny fikarohana dizitaly fa ny mpikaroka dia afaka manomboka izao tontolo izao amin'ny fomba samihafa. Ny mpikaroka academic dia afaka manangana rafitra tena izy izay azon'ny olona maro ampiasaina: izahay dia nampiantrano fanadihadiana maherin'ny 10.000 ary nanangona valinteny maherin'ny 15 tapitrisa. Ny fahafahana mamorona zavatra azo ampiasaina amin'ny maîtrise dia avy amin'ny hoe raha vantany vao vita ny tranokala, dia tsy misy antony tokony hamoahana azy ho an'ny olon-drehetra eto amin'izao tontolo izao (mazava ho azy fa tsy marina izany raha toa isika olombelona fanadinadina minisitra). Ankoatra izany, afaka manadihady karazana fikarohana maro samihafa ity. Ohatra, valinteny 15 tapitrisa ireo, ary koa ireo mpandray anjara an-tseranam-piainantsika, dia manome fandaharam-pitsapana sarobidy ho an'ny fikarohana ara-metolojika amin'ny ho avy. Hamaritra bebe kokoa momba ireo fikarohana hafa aho izay noforonin'ny rafitra maimaim-poana ho an'ny tahirim-pahalalana - indrindra ny taham-pandrenesana sarobidy - rehefa miresaka momba ny fanandramana ao amin'ny toko faha-4 aho.